-Dhacdo China Wireless Earbuds Bluetooth 5.0 Samaynta Samaynta Sameecada iyo Warshada |Roman
Qalabka dhegaha-dhegaha ee bilaa-waayirka ah ee Bluetooth 5.0, Taleefoonnada dhegaha ee-gudaha
Waqtiga hadalka: 5H
Sanduuqa dallacaadda: 500 mAh
WT230U chipset iyo Bluetooth 5.0 si loo gaaro gudbinta degdega ah iyo isticmaalka hooseeya.
Ergonomic-ku-xiran dhegaha oo leh saddex lammaane oo kala duwan noocyada koofiyadaha dhegta ee raaxada iyo xasilloon.
Laba jeer ku dhufo kantaroolka taabashada, taas oo ka dhigaysa hawlgal kasta mid fudud.
6mm unugga gaarka ah ee PEEK isku-darka bayoloji cad oo tamar leh oo leh qallooc hoose iyo awood dhallin dhawaq wanaagsan.
Xariif ah oo ku habboon: fur daboolka oo ku xidh: sanduuqa dallacaadda oo leh shaqada kontoroolka daminta ama daminta.
Isku-xidhka Hal-tallaabo iyo Kontoroolka Taabashadda Fudud: TAGRY X08 taleefoonnada dhegaha ee bluetooth-ka ayaa qaata beddelka hoolka.Xidhiidhka ugu horreeya ka dib, taleefoonnadan dhegaha-la'aanta ah ayaa ku xidhi doona qalabkaaga marka aad furto kiiska dallacaadda, kaas oo dhakhso badan oo habboon.
Inta aad isticmaalayso, waxaad taaban kartaa dhegaha-dhegaha midkood si aad u xakamayso taleefanka, sida beddelka muusigga, hagaajinta mugga, wicitaannada taleefanka, caawiyaha codka, iwm. Looma baahna inaad la qabsato taleefannada gacanta.
Sanduuqa dallacaadda ee 500mAh wuxuu si buuxda u dallaci karaa laba dhegaha-dhegaha ilaa 6 jeer iyo hal dhegaha-dhegaha ilaa 12 jeer, taasoo u oggolaanaysa ciyaarista muusiga iyo wacitaanka waa ka sii waarta.
1. Xidhiidhka: ka saar dhegaha bidix iyo midig sanduuqa charging-ka, talefankuna wuxuu si toos ah u geli doonaa xaaladda iftiinka casaanka iyo buluugga ah ee beddelka ah.Taleefanka ayaa baari doona magaca lammaanaha.Guji isku xirka oo waxaa jiri doona cod elektaroonik ah oo degdeg ah.
2. Heestii hore:Muusik ku daaran 3 ilbiriqsi adiga oo taabanaya sameecadaha (L).
3. Heesta xigta: Daar muusik 3 ilbiriqsi adiga oo taabanaya sameecadaha (L).
4.Music play/pause Marka uu taleefoonka dhegta dhegta garaaco muusiga, heesta waxa la joojin karaa iyada oo la taabto dhegta-dhegaha (R) laba jeer oo xidhiidh ah, heesta waxa la garaaci karaa qaliin soo noqnoqda.
5. Waxaad laba jeer gujin kartaa headset-ka si aad muusiko ugu garaacdo ama uga jawaabto wicitaanada soo socda, adiga oo siinaya khibrada ugu hufan, marka la soo waco, laba jeer guji labada dhinac si aad uga jawaabto wicitaanka, inta lagu jiro wicitaanka, laba jeer guji labada dhinac si aad u xidho , Waqtiga muusiga laba jeer guji labada dhinac si aad u ciyaarto / u joojiso muusigga.
Hore: Semi-in-Earbuds-yada Wireless-ka runta ah oo leh kiis dallacaad ah
Xiga: Dhagaha dhegaha ee Wireless-ka ee runta ah oo leh kiis dallacaad bir ah oo bannaan, daahitaan hoose
Dhagaha dhegaha ee Wireless-ka ee runta ah TWS Bluetooth
Dhagaha dhegaha ee Wireless-ka ah ee runta ah ee dhegaha-dhegaha Bluetooth-ka Touc...
Dheecaanka Bluetooth oo leh Mic, Taleefoonnada dhegaha ee Bluetooth-ka ee bilaa-la'aanta ah, Bluetooth Mono Headset, Budhadhka dhegaha ee buuqa baabi'inaya, Taleefannada Dhagaha ee Gudaha, Qalabka dhegaha ee Bluetooth 5.0,